Aabayaal ISIS ka tirsan oo si cadownimo leh uga aargutay askar la qabtay: SAWIRRO
Kooxda ISIS ee dagaalka kula jira ciidamada Ciraaq iyo xulufadooda ayaa soo bandhigay muuqaal cusub oo ay u ogolaanayaan Aabayaal wiilashoodu ku dhinteen dagaalada in ay ka aargutaan askar nolol lagu qabtay kuwaas oo ay si waxashnimo ah oo u muuqaal eg film u dileen.
by calanka —	December 26, 2016 —	Sawirro
ISIS oo gawaari miineysan oo aan la joojin karin raaxada uga qaaday ciidamada Ciraaq: SAWIRRO
Ciidamada Ciraaq iyo xulufadooda ayaa in ka badan labo bilood weli si rasmi ah gudaha ugu geli la`magaada Mosul sababo la xiriira difaacyada ISIS oo adag iyo gawaari miineysan oo aan la joojin kari oo laaxada looga qaaday.
by calanka —	December 25, 2016 —	Sawirro
Arday xawaare dheer ku waday gaari oo boolis qabtay iyo caawimaad uusan fileyn oo uu ka helay: VIDEO
Dhacdo ka yaabisay baraha bulshada ayaa waxaa lasoo dhigay muuqaalka boolis ka tirsan Menomonie Police Department ee dalkaasi Mareykanka kaas oo joojiyay arday gaari ku wada xawaare dheer kaas oo ka deg-degsanaa jaamacad balse aqoon sida loo xiro tie-ga.
by calanka —	December 24, 2016 —	Video
SUURIYA: Muuqaalka xaafadihii laga daad gureeyay mucaaradka ee XALAB: SAWIRRO
Xaafadaha magaalada Xalab ay ka haysteen mucaaradka Suuriya ee dhawaan laga daadgireeyay halkaasi kaddib markii ay ku go`doomeen halkaasi ayaa waxaa laga soo qaaday muuqaallo muujinaya sida ay ula hareen dagaalada xaafadahaasi.
by calanka —	December 24, 2016 —	Sawirro
CAJIIB: Sida loo maareeyo marka ay buux-dhaafaan tareenada dalka Japan: VIDEO
Sida caadada ah caasimadda dalka Japan ee Tokyo ayaa waxaa ku badan dadka, waxaana ay arrintani si weyn u saameygay gaadiidka sida tareenada iyo basaska. Hadaba waxaa cajiib ah sida loo maareeyo marka ay buux-dhaafaan tareenada.
Qaabkii loo dilay Anis Amir – ninkii ka dambeeyay weerarkii magaalada Berlin: SAWIRRO
Waxaa habeen hore lagu dilay magaalada Milano ee dalka Jarmalka ninkii lagu tuhunsanaa weerarkii isniintii laga geystay suuq ku yaal magaalada Berlin, caasimadda dalka Jarmalka kaas oo lagu dilay 12 ruux, laguna dhaawacay 48 kale.
Daacish oo nolosha ku gubtay labo askari oo turkish ah
Ururka la baxay Khilaafada Islaamka ee DAACISH ayaa soo saaray muuqaalka laba qof oo ay ku sheegeen in ay yihiin ciidmo Turki ah oo nolosha ay ku qabteen kuwaas oo ay dab iyo baasiin qabadsiiyeen. Dowladda Turkiga ayaa dhankeeda xirtay baraha bulshada si aan loo arkin muuqaaladan.
by calanka —	December 23, 2016 —	Sawirro
ISIS oo labo general siyaabo kala duwan ugu dilay Yemen: SAWIRRO
Labo general oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Yemen ayaa dhawaan siyaabo kala duwan waxaa loogu dilay dalkaasi Yemen. Labada dil ayaa waxaa ka dambeeya kooxo xiriir la leh islaamiyiinta ka dagaalanta dalkaasi kuwaas oo si toos ah u duubayay dilka, sawirrana ka qaaday.
by calanka —	December 22, 2016 —	Sawirro
Kooxda ISIS ee ka howlgasha Masar oo xukunno argagax leh ku fulisay eedeysanayaal: SAWIRRO
Garabka kooxda ISIS ee dalkaasi Masar, gaar ahaan gacanka Sinay ayaa soo bandhigay muuqaallo argagax leh kuwaas oo ay xukunno kala duwan ay ku fulinayaan eedeysanayaal ay ku heleen basaasnimo, ka ganacsi daroogo iyo askar.
Ciidamada AMSIOM oo ka baxaya xaruntii Jaamacadda Umadda: VIDEO
Ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa AMISOM ayaa go`aan ku gaaray in ay ka baxaan xaruntii Jaamacadda Umadda ee ku tiilay wadada Afgooye taas oo ay ku jireen muddo toban sano kor u dhaafeysa. Wafdi ka socda ayaa lagu soo wareejiyay xarunta oo ay dayactir aan buurneyn ay ku sameeyeen.
by calanka —	December 22, 2016 —	Video